Ny fiakaran'ny vidin'ny lavanila dia mampirongatra ny asan-dahalo manerana an'i Madagasikara
Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Ny fiakaran'ny vidin'ny lavanila dia mampirongatra ny asan-dahalo manerana an'i Madagasikara
Ny vidin'ny lavanila, fanondranana lehibe indrindra eto Madagasikara, dia nisondrotra tato anatin'ny volana vitsivitsy taorian'ny fahasimban'ny tafio-drivotra sy ny fitomboan'ny fangatahana ny fitrandrahana voajanahary nanery ny tsena.
Nanomboka tamin'ny 2015, ny vidin'ny zava-manitra dia nisondrotra hatramin'ny $ 100 isaky ny kilao ka hatramin'ny "tampon'isa tsy mbola fahita teo anelanelan'ny $ 600 ka hatramin'ny $ 750 iray kilao", hoy i Georges Geeraerts, filohan'ny Vondron'ireo Mpanondrana Vanilla any Madagascar.
Ny nosy ranomasimbe indianina dia manodidina ny 80 isanjaton'ny famokarana lavanila manerantany, ary ny fivarotana dia mijanona ho tsy voafehy.
Ny fangatahana iray amin'ireo tsiro malaza indrindra eran'izao tontolo izao dia nihoatra ny famoahana manodidina ny 1,800 taonina isan-taona.
Nihamafy ny tsy fahampiana taorian'ilay rivodoza tropikaly Enawo namely an'i Madagasikara tamin'ny fiandohan'ity taona ity nanimba ny ampahatelon'ny voly ao amin'ny nosy.
Ny vidin'ny Skyrocketing dia nahatonga ny lavanila tsy ho zakan'ny orinasa miharo menaka intsony. Ny orinasam-pisakafoanana gilasy sasany tsy maintsy misintona ny tsiro amin'ny menio.
Tany Boston, nisy tompona fivarotana gilasy nilaza tamin'ny Boston Globe fa fotoana fohy taorian'ny tafio-drivotra ny vidin'ny tsaramaso lavanila feno kitapo dia nisondrotra 344 isan-jato hatramin'ny $ 320 isaky ny kilao.
Any Londres, ny rojo Oddono gelato dia tsy maintsy nanala ny gilasy vanilla avy tao anaty menio, nilaza tamin'ny mpanjifa fa hiverina izy ireo aorian'ny fijinjana vanila 2017.
Mandritra izany fotoana izany, ny bonanza vola tampoka dia nandrahona ny hampiroborobo ny asan-dahalo manerana an'i Madagasikara.
Ireo tsena ao amin'ny faritra Sava mpamokatra lavanila dia tototry ny motera, smartphone, panneau solaire, mpamokatra herinaratra, fahitalavitra efijery ary fanaka an-trano feno hafanana.
"Tsy misy dikany intsony ny vola, heverin'ny olona ho maimaim-poana, lasa manjary tsy manjary izy io," hoy ny mpamboly lavanila Vittorio John tamin'ny AFP.
Ny tranga halatra avy amin'ny fambolena lavanila dia nanjary matetika kokoa, ka nanery ny tantsaha sasany hatory an-tsaha sy hiambina ny vokatra sarobidy. Raha ny fampitam-baovao voaray, dia mpangalatra maromaro no nokapohina, nogadraina na novonoina mihitsy.
Ny vanila dia be mpampiasa amin'ny sôkôla, mofomamy ary zava-pisotro, ary koa gilasy, aromatherapy ary ranomanitra. Izy io dia iray amin'ireo sakafo miasa mafy indrindra eto an-tany. Ny tsaramaso vanila dia voan'ny orkide, ary ny tsirairay dia tsy maintsy zezika amin'ny tanana.
Air China dia lasa zotram-piaramanidina mpiaramiasa amin'ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina 2022
Lalànan'ny fitsangatsanganana: ny raharaha seza mihena tsy mampino